कोरोनाले पूरै देश आतंकित भइरहेका बेला मन भुलाउन सित्तैमा पोर्न भिडियो सेवा! - Shikhar Post Shikhar Post
‘यो बेला घरबाट निस्कने होइन,’ पोर्नहबलाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार गार्डियनले भनेको छ, ‘घरमा एक्लै कसरी बस्नु? यसको विकल्पका रूपमा हामीले हाम्रो प्रिमियम सेवा सबै इटालीलाई सित्तैमा दिने निर्णय गरेका हौं। यसले उहाँहरूको एकल जीवनमा चार चाँद लगाउने अपेक्षा गरेका छौं।’ आज प्रकाशित शुक्रबार साप्ताहिकले यो खबर छापेको छ।
प्रकाशित मिति : बिहीबार, ६ चैत्र २०७६ १५:५१